Iza i Maya Jama? Ny zava-drehetra ho fantatra momba ny sakaizan'i Ben Simmons vaovao ary ny an'i Stormzy taloha - Pop-Kolontsaina
Iza i Maya Jama? Ny zava-drehetra ho fantatra momba ny sakaizan'i Ben Simmons vaovao ary ny an'i Stormzy taloha
Ny mpilalao basikety aostraliana Ben Simmons dia vao tsy ela akory no nahita ny azy sipany Maya Jama ao Wimbledon ny alatsinainy. Ny duo dia nalaina sary tamin'ny fanorohana sy fandokisana raha nijery an'i Novak Djokovic sy Cristian Garin niady teny amin'ny fitsarana.
Araka ny Daily Mail , dia nivoaka ny mpivady tao amin'ny All England Lawn Tennis sy Croquet Club taorian'ny lalao. Voalaza fa nandeha niantsena izy ireo ny antoandro.
Mpivady vao nampandrenesina Maya Jama sy ny toetrany vaovao, mpilalao basikety, Ben Simmons no manomboka ny fifandraisan'izy ireo ao Wimbeldon mahafatifaty ry zareo !? pic.twitter.com/VVA00SICZ5
- The Nikki Diaries (@thenikkidiaries) 5 Jolay 2021
Ny fisehoan'ny besinimaro dia niseho efa ho roa herinandro taorian'ny nahitana an'i Ben Simmons sy Maya Jama tao amin'ilay trano fisakafoanana iray ihany ary voalaza fa nijanona tao anaty fiara iray ihany. Nanaitra ny duo olon-tiany tsaho tamin'ny taon-dasa taorian'ny namelan'ny kintana NBA hevitra tao amin'ny lahatsoratr'i Jama's Instagram ho an'ny Halloween.
ahoana no ilazana amin'ny bandy fa tsara izy
Lahatsoratra zarain'i Maya Jama (@mayajama)
Ny tatitra dia milaza fa niainga ho any Philadelphia i Jama mba hihaona amin'i Simmons amin'ny Mey. Simmons dia nifandray tamin'ny kintana KUWTK Kendall Jenner. Nisaraka ny roa tonta tamin'ny taona 2019. Nandritra izany fotoana izany dia voalaza fa nampiaraka tamin'ny rapper Stormzy i Jama alohan'ny niantsoana azy hiala tamin'io taona io ihany.
malahelo mafy ny sipako aho, maharary izany
Vakio ihany koa: Iza no sakaizan'i Malia Obama? Ny zavatra rehetra ho fantatra momba ny fifandraisany amin'ny mpiara-mianatra aminy Harvard, Rory Farquharson
Iza ilay sakaizan'i Ben Simmons, Maya Jama?
Maya Jama dia mpanentana amin'ny fahitalavitra fanta-daza ary mpampiantrano amin'ny radio monina any London. Teraka tamin'ny 14 Aogositra 1994, nanjary nisongadina ny tovolahy 26 taona taorian'ny nandraisany ny Copa90's Maya's FIFA World Cup Cities, andian-dàlan'ny fitsangatsanganana izay nandrakotra ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany FIFA 2014 tany Brezila.
Nanomboka ny asany tamin'ny naha mpanolotra ny JumpOff TV izy ary nanohy nampiantrano ny MTV Essentials sy MTV News. Izy koa dia mpiara-nanolotra ny 4Music's Trending Live! ary ny Cannonball an'ny ITV.
Maya Jama dia nampiantrano ny MTV's Wrap Up tamin'ny 2014 sy ny True Love na True Lies tamin'ny taona 2018. Nanolotra ny vanim-potoana voalohany an'ny Channel 4's The Circle ihany koa izy.
Tamin'ny taona 2017, Maya Jama no nampiantrano ny Pre-Brits Party ary izy koa no lasa mpampiantrano tanora indrindra an'ny MOBO Awards an'ny Channel 5 tamin'io taona io ihany. Nipoitra tao amin'ny A League of the Own Road Trip sy The Big Fat Quiz tamin'ny taona 2019 izy.
Ny dian'i Maya Jama amin'ny maha-mpampiantrano radio azy dia nanomboka tao amin'ny Drive's Rinse FM miaraka amin'i Maya tamin'ny taona 2014. Niara-niasa tamin'ny seho Greatest Hits an'ny Radio 1 sy ny seho titular an'ny BBC Radio 1 an'i Maya Jama izy avy eo.
Maya Jama dia mpanolotra an'i Peter Crouch an'ny BBC One: Miarova ny fahavaratra miaraka amin'i Peter Crouch sy Alex Horne. Izy koa dia mandray ny fifaninanana fahitalavitra BBC Three an'ny zava-misy ao amin'ny Glow Up: Kintana manaraka ho an'i-Britain.
maninona isika no te handratra be
Nanangana ny marika MIJ Masks ho azy manokana ihany koa i Jama tamin'ny taon-dasa. Mpisolo vava ny fahasalamana ara-tsaina koa izy ary mitaona ny mpanaraka azy hanokatra ny olana ara-pahasalamana.
Talohan'ny nanombohany ny fifandraisany vaovao tamin'i Ben Simmons, mpiangaly rap rap an'i Stormy tamin'ny taona 2015. Na dia tsy hitan'ny besinimaro aza izy ireo tamin'ny voalohany, dia nanamafy ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny taona 2016 izy mirahalahy.
Nipoitra ihany koa i Jama tao amin'ny horonantsary mozika Stormzy's Big for Your Boots. Ilay rapper dia nanolotra ny hirany Tsingerintaona Girl tamin'ny fitsingerenan'ny faha-22 taonan'ny taloha.
Ny mpivady taloha dia voalaza fa nisaraka taorian'ny niarahany nandritra ny efa-taona mba hifantoka amin'ny asany manokana. Ny loharanom-baovao akaiky an'i Maya Jama dia nilaza izany teo aloha Ny fitaratra faly izy miaraka amin'i Ben Simmons ary mifankatia tokoa izy mivady.
Vakio ihany koa: Iza no mampiaraka amin'i Olivia Rodrigo? Ny zavatra rehetra ho fantatra momba ny sakaizany vaovao, Adam Faze
john cena roman manjaka promo
Ampio Sportskeeda hanatsara ny fandrakofany ny vaovao momba ny kolotsaina pop. Raiso izao ny fanadihadiana mandritra ny 3 minitra .
wwe 2017 mpandatsa-pandrika malaza
tombony amin'ny tsy fanananao media sosialy
ny vadiko no manome tsiny ahy ny zava-drehetra
maninona no mafy be ny fifandraisana
ahoana no ahafantarako raha tia ahy izy